Umakoti weRe-Animator Udlame Ngokweqile - iHorror
Ikhaya Izindaba Zokuzijabulisa Ezesabekayo Umakoti weRe-Animator Udlame Ngokweqile
Umakoti weRe-Animator Udlame Ngokweqile
by UPaul Aloisio Kwangathi 21, 2017
ebhalwe ngu UPaul Aloisio Kwangathi 21, 2017
Inani lezikhathi engizibone ngo-1985 Ukunikeza-animation akunakunqotshwa. Kuyisisekelo kunoma iyiphi ingxoxo yama-movie asabisayo amakhulu, noma ngabe sikhuluma amafilimu e-Lovecraftian noma ama-movie asabekayo amakhulu kakhulu. Ukuvumelana okujwayelekile ukuthi le filimu iyamangalisa, futhi ngingakufakazela lokho. Kepha kuthiwani ngokulandela?
Kuyo yonke iminyaka yami yokubuka, ukufunda, noma ukuthola enye indlela yokuqeda ukwesaba, angikaze ngizwe okuningi ngakho EzikaYuzna enye inkondlo elama kuya ifilimu. Umakoti weRe-Animator, eyakhishwa eminyakeni emine kamuva ngo-1989, idlule ngokungatholakali isikhathi eside kakhulu. Ngaphandle kwalokhu, Umlobokazi empeleni kungukukhonjiswa okumangazayo kogesi nokwesaba. Inesethi yayo eyingqayizivele yama-quirks, futhi ithoni ihluke kakhulu kweyasekuqaleni. Ngenkathi bobabili behlukile, basebenza kahle njengezicucu zomngane komunye nomunye.
UJeffrey Combs noBruce Abbott babuyela endimeni yabo njengoHerbert West noDan Cain. UWest usemacaleni akhe amadala futhi futhi uhlela ukuvuselela owesifazane ophelele. Kusetshenziswa inhliziyo yomthandi ofile kaKayini, imiphumela iyinhlekelele, njengoba umuntu engacabanga. Sonke lesi sikhathi, ososayensi ababili balandelwa yinhloko kaDkt Hill kanye nomphenyi oshisayo emzileni wabo. Ukwenza izinto zibe nzima kakhulu, uDan Cain ongenakuphikiswa uzibandakanye nomunye wesifazane ongaziqapheli izivivinyo zobuqili ezenziwa egumbini elingaphansi kwendlu yaseNtshonalanga neyakwaCain. Yini engase ihambe kabi?
Isithombe sihlonishwa yiKhaya leCinema Choice
Imiphumela ingeyesezingeni eliphezulu, njengoba umuntu angalindela ekulandeleni ifilimu ebabazekayo, futhi kunezigcawu ezingaphezulu kwezimbalwa ezinesibindi - kepha ngisho lokhu ngezindlela ezinhle kakhulu. Ukulandelana okubandakanya umakoti oyisiyingi, ikakhulukazi, kuyisiyaluyalu esiswini. Umzimba wakhe, inhlanganisela eyonakele yezitho zomzimba womuntu ezilahliwe, inguqulo ebabazekayo ye-Elsa Lanchester engenakulibaleka Umakoti kaFrankenstein (1935). Ifilimu icishe isebenze njengenguqulo ebuyekeziwe yefilimu ka-1935. Iphinda iphinda iphuzu lokuthi mhlawumbe umuntu wayengahloselwe ukudlala uNkulunkulu.
Umakoti weRe-Animator ithola amandla ayo eqiniso ngasekupheleni kwefilimu lapho i-shit evuselelwa kabusha iqala ukushaya umlandeli oyisaga. Zonke izivivinyo zaseNtshonalanga zenziwa ngasikhathi sinye ngemuva kokulahlwa njengezinqatshiwe. Banesibindi, bakhubazekile, badidekile, futhi bathukuthele. Ekubonisweni okwesabekayo, umphumela wokugcina yilokho umuntu angacabanga ukuthi ukujula okumnyama kakhulu kwesihogo kungabukeka kanjani. O, futhi kukhona lomfana omncane:
Isithombe sihlonishwa yi-DVD Exotica
Nginganikeza izizathu ezimbalwa zokuthi kungani ngikholelwa ukuthi ukulandelana kubonakala kubongwa kangaka. Eyokuqala ukuthi eyokuqala yayimangalisa kakhulu futhi ingeyangempela ukuthi noma yini engamangalisi kakhulu yayiqiniseka ukuthi ingcwatshwa ngaphansi kwesisindo salowo eyandulelayo. Ihlaya elihlasimulisa umzimba, Ukunikeza-animation ibiyisilima ngokumnyama ngenkathi ifinyelela amazinga egazi kanye ne-surreal gore engavamile ukubonwa ebhayisikobho ngaphambili. Umakoti weRe-Animator entule ingxenye eqinile ehlekisayo. Ngenkathi iseyibhayisikobho ene-goofy kakhulu, ibinqotshwe kakhulu. Kusukela ekuqaleni kuze kube sekugcineni, idlala njengolimi oluncane kakhulu kunefilimu yokuqala.
UJeffrey Combs ubukeka eyingozi kakhulu kule filimu. Ngaphandle kwelukuluku, iNtshonalanga ayisabonakali inendaba encane ngempilo ayivuselelayo. Izimpilo azichithile kule nqubo zibukeka zimane nje zingumonakalo wesibambiso. Lokhu kuboniswe kahle ekuqaleni kwefilimu lapho uKayini noWest bebonakala bevolontiya empini yombango yangaphandle njengodokotela. Ngaphandle kokuthi esikhundleni sokunaka amasosha alimele, iNtshonalanga isebenzisa izidumbu njengezinto ezibonakalayo zokuhlolwa kwakhe. Isingeniso esixakile esingenencazelo eningi futhi sisebenza kuphela ukusiza ukudala ithoni eyinqaba yezinto ezizayo.
Yize ngishesha ukuyidumisa ifilimu, ngabe ngiqamba amanga uma ngisho lokho Umakoti weRe-Animator kwakungukuqhekeka komhlaba noma kumane kujabulise njengoba kwakwandulele. Yifilimu enhle - ikakhulukazi ukwehla okumnyama kuya ekuhlanyeni ekugcineni - kepha kufana nokufana I-Exorcist, akukho okulandelayo okungaze kuqhathanise *. Kuyimpi yokukhuphuka engenakunqotshwa. Noma kunjalo, kufanelekile ukushiwo, futhi isici esiphindwe kabili samafilimu womabili singenza ubusuku obumnandi nobumnandi ngokweqile.
*cha, angikhulumi nge-The Exorcist 2, ya dummy. Leyo movie iyabheda. Nokho, i-Exorcist 3? Manje siyakhuluma.
Isithombe sihlonishwa yiNerdist
19851989ukwethuka okuhle kakhuluUBrian YuznaI-HP LovecraftUHerbert Westama-movie asabisayoUkunikeza-animationUmphakathi
Ngaleso sikhathi uScooby Doo Wawela Eziqongweni Zamawele!
Ukuxoxisana: Umbhali uSeth Sherwood Ukhuluma Ngemvelaphi Yesikhumba